Chezọọ mgbake: Coronavirus nwere ike ị nweta ọrịa 10 ugboro karịa
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Chezọọ mgbake: Coronavirus nwere ike ị nweta ọrịa 10 ugboro karịa
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ahụike • Akụkọ na -agbasa Malaysia • News • Iwughachi • Safety • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Onye oru TravelNewsGroup mara ya ma kọọ ya na May ma gbachi nkịtị. Ugbu a, onye ọkachamara na Malaysia na-ada ụda mkpu na-ekwu:
Ihe ize ndụ nke ibute ọrịa COVID-19 nwere ike ịghọ okpukpu 10 karịa, dị ka nnyocha e wepụtara taa na Malaysia. Malaysia chọpụtara nsogbu ọhụrụ coronavirus nke ji okpukpu iri karịa ọrịa, kwuru Dr. Noor Hisham bin Abdullah, onye dọkịta na-awa ahụ na Malaysia nke rụrụla ọrụ dị ka Onye isi Nchịkwa Ahụike kemgbe Machị 2013. A maara ya nke ọma maka ịrụ ọrụ pụtara ìhè na nke pụtara ìhè. na-eduga Malaysia ịlụso ọrịa COVID-19 ọgụ.
TravelWireNews ekwuolarị banyere nsogbu nke COVID-19 na May dabere na akụkọ sitere n'aka Russian RT. Ndị mgbasa ozi ọdịda anyanwụ kagburu akụkọ a.
The TravelWireNews (nwanne nwanyị nke eTurboNews) a kọrọ na May 2020: Mbido Mee research, nke ndị otu American na Britain jikọtara ọnụ nke Los Alamos National Laboratory duziri. A tọhapụrụ ya tupu nyochaa ndị ọgbọ dị ka 'ịdọ aka ná ntị oge mbụ' nye ndị nchọpụta ndị ọzọ. Ka o siri kwụrụ, ndị sayensi na-amụ coronavirus gburugburu ụwa nwere ike ịbụ na ha nyochara usoro mkpụrụ ndụ ihe nketa nke ihe ndị okenye mejọrọ, ya mere, ọ dị oke mkpa na ha na ndị otu a jikọta aka nweta ozi ọhụụ. "Anyị enweghị ike imeli ka anyị kpuo ìsì ka anyị na-ebugharị ọgwụ mgbochi na ihe ndị na-alụso ọrịa ọgụ n'ime nyocha ahụike," onye ndu akwụkwọ bụ Dr Bette Korber, nke a maara maka ọrụ ya na HIV, kwuru.
Ebe ọ bụ na enyochabeghị akwụkwọ akụkọ ahụ, edepụtara ya n'ịntanetị na sava BioRxiv. Otú ọ dị, nkwupụta nke ndị ọkà mmụta sayensị metụtara gụnyere na-egosi na nchoputa ahụ dị mma ma na-ejikwa oke egwu - akụkọ ahụ dị peeji iri atọ na atọ, ma dị mkpụmkpụ. "Nke a bụ akụkọ siri ike," ka Korber kwuru banyere nchọta ahụ.
Mgbanwe ahụ, nke a hụrụ na mpaghara ndị ọzọ nke ụwa ma kpọọ ya D614G, ka achọpụtara n'ime opekata mpe atọ n'ime okwu iri anọ na ise na ụyọkọ nke sitere n'aka onye nwe ụlọ oriri na ọ returningụ restaurantụ na-alọta site na India ma mebie ụlọ iche ụbọchị 45. Kemgbe ahụ, a mara nwoke ahụ nga ọnwa ise na nhụta nha. A chọpụtakwara nje ahụ na ụyọkọ ọzọ metụtara ndị mmadụ na-alọta na Philippines.
US Top immunologist Dr. Anthony Fauci na-ekwu ugbu a mmụba ọhụrụ nwere ike ime ka mgbasa coronavirus gbasaa. Straindị ahụ nwere ike ịpụta na ọmụmụ ihe dị ugbu a na ọgwụ mgbochi nwere ike ọ gaghị ezu oke ma ọ bụ enweghị ike megide mmụba ahụ, Director General of Health Noor Hisham Abdullah kwuru.
“Mgbanwe D614G na-eme ka nje a na-efe efe. Ọ nwere ike gbasaa ngwa ngwa ma kpuchie usoro nlekọta ahụike ma ọ bụrụ na anyị emeghị mgbalị abụọ anyị na-achịkwa, "Dr. Edsel Salvana kwuru
Dr. Salvana bụ Director nke Institute of Molecular Biology na Biotechnology na National Institutes of Health na Mahadum nke Philippines Manila, ma bụrụkwa Prọfesọ Njikọ Ọrịa na Onye Nchịkọta Nyocha na Ngalaba Ọrịa Na-efe Ọrịa nke Ngalaba Nkà Mmụta Ọgwụ na Philippine General Hospital. Ọ bụkwa Prọfesọ Adjunct maka Ahụ Ike atwa na Mahadum Pittsburgh. Ọ bụ ugbu a bụ onye isi nke kọmitii nke HIV nke Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases ma duzie usoro nke usoro nlekọta ahụike maka mpaghara maka ịgwọ ọrịa na-ebute ọrịa HIV. Ọ na-anọdụkwa dị ka onye nnọchi anya ụlọ ọrụ na Global Fund Country Coordinating Mechanism.
Tọ D614G mutation na SARS-CoV-2 bụ aha ọjọọ maka ya na-ebili dominance n'ụwa nile. Mgbanwe a na-agbanwe amino acid na ọnọdụ 614, site na D (aspartic acid) na G (glycine) - ya mere, D-614-G. Mbido D614 ugbu a bụ ụdị G614. Ajụjụ bụ: Kedu ihe dị adị n'ezie nke mmụba a ma ọ bụ G614 dị iche iche na-eweta, n'ihe gbasara mbufe, oke ọrịa, ọgwụgwọ, na ọgwụ mgbochi?
Na nyocha nke July nke e bipụtara na Cell, Dr. Bette Korber, onye na-ahụ maka ihe ọmụmụ banyere ihe ọmụmụ, na mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ, na ndị ọrụ ibe na Los Alamos National Laboratory nyochaa usoro SARS-CoV-2 site na ndị ọrịa 999 na UK. Nsonaazụ gosiri na ndị ọrịa butere ụdị G614 nwere ibu nje virus ka elu karịa D614. Na omenala ụmụ mmadụ na ụlọ nyocha, Korber et al. gosipụtara na ụdị G614 gosipụtara mmụba ụba karịa D614.